Ao amin'ny tontolo izay mihoatra noho ny ampahatelon'ny fanambadiana manomboka amin'ny aterineto, Nisy nihevitra miaraka ny Internet dia tsy ho toy izany mba hahatakatra hevitra mafy.
Na izany aza, ny olona sasany dia mbola mivaralila amin'ny alalan'ny fifandraisana an-tserasera manomboka fa tsy amin'ny sehatry ny barany eo an-toerana na hafahafa namanao-of-a-namana nanangana.
Lazaina mahatonga ny efa lany liana, izay mahatonga izy hanontany fanontaniana. Ireto misy vitsivitsy ihany isika, dia vonona ny hisotro ronono miaraka amin'ny daty sy ny tokan-tena jamba ny latabatra.
Ahoana raha olona Hita ho mpamono olona? Avy eo dia, izay mampinono. Na izany aza, Ahoana raha hafa manan-danja Hita ho mpamono olona? Na ny weirdo? Sa manana mpanao ody amin'ny voankazo hafakely? Izany no mampiaraka: nanantena ny hafa dia tsy psycho.
Tsy hitanao izany ho nampiseho ny maha? Raha ny marina, izany no iray amin'ireo hevi-diso ny amin'ny aterineto lehibe indrindra mampiaraka. Rehefa ny olona iray dia tao ambadiky ny Keyboard, be dia be izy ireo tsy mahatsapa fanerena, izay mamela azy ireo tena nisokatra. Izany dia mifanohitra tanteraka amin'ny hafainganam-pandeha hoe mampiaraka sy ny fotoana hihaona endriny-tava, rehetra ny lahateny kely dia ho an'ny vorona! Manana ny fotoana rehetra midina ho any amin'ny foto-kevitra manan-danja sy tena minia ny hafahafa banter.
Ahoana raha tsy mitovy ny sary? Voalohany indrindra, Afaka mampanantena aho fa rehefa hihaona amiko dia tsy ho Faly be amin'ny sofina ny sofina amin'ny jiro tanteraka, izay no ny sary-kevitra aho tahaka. Izany no sary dia ho an'ny. Raha miverina izy ireo avy mba ho zara raha toy izany koa ireo olona eo amin'ny sary, Hany azoko atao dia ny manantena toetra mifanaraka ny hafatra izay nanintona ahy mba hitsena azy. Raha toa ilay olona liana izahay dia nandainga momba ny hoe iza izy ireo, na izany aza, mena ny sainam-pirenena dia miseho na aiza na aiza.
Mamoy fo ve ianao? Tsy misy intsony na tsy mafy noho ny hafa mitady fitiavana. Ny olona tsy manambady rehetra tezitra, fanantenana, tsy manam-paharetana sy tarihan'i, tsy izahay? Fehiny dia: fa tsy ho mora ny mihaona ny olona avy any intsony. Izany tsy ho mora ihany koa ny handeha ho any amin'ny toeram-pivarotana, fa izany no mahatonga antsika hividy ny akanjo an-tserasera!
Nahoana Aho no Tsy fotsiny ianao aoka aho anao amin'ny olona iray? Satria daty jamba no mazàna ahafantarana mahatsiravina. Fotsiny satria ny namana tahaka ny olona iray, dia tsy midika dia sy manana antoko fahatelo handiso fanantenana raha ny loza no mahatonga ny zava-drehetra ratsy.
Ahoana no ahafahanao tena fantany olona an-tserasera? Toy izany koa Fantatro namako rehetra ny toerana tena Sex and the City fandaharana, nenitoako ny mammogram vokatra sy ny mpampianatra antitra ny nahaterahany voajanahary drafitry. Amin'izao vaninandro izao taona, dia mizara ny zava-drehetra ny Internet. Isika hifandray an-tserasera, dia hamelona indray tserasera, isika hanazavana uninteresting farany tsipiriany rehetra eo amin'ny fiainantsika an-tserasera; fa marina ihany no ahitantsika ny fitiavana ihany koa.
Moa ve tsy lafo? Raha tsy manao izany tsara. Tsy misy tena antony samy hafa manana iray tapitrisa mombamomba ny tranonkala circling. Mitadiava toerana izay mety aminao, soniavo, ka aloavy. Mampanantena aho dia hiafara rehetra ho mora kokoa noho ny akanjo vaovao no nividiananao ho mivoaka, na ny zava-pisotro no tsy maintsy hividy ny tenanao miandry olona iray atolotra, etc..
Aza tianao ny hihaona ny olona ny fomba ara-dalàna? Tanteraka. Miandry. Izany 2014? Izany no fomba ara-dalàna!
Fivoriana ny olona ao amin'ny olona dia tsy ho namely hiala ny sakafo. Fotsiny satria misafidy ny mampiaraka amin'ny aterineto dia tsy midika fa mitafy blinders ho amin'ny sisa amin'izao tontolo izao.
Na ny fanahinay vady dia alalan'ny tsindry bokotra iray izy, na ny andian-tsoratra any, fotsiny isika te-lavo madly amin'ny fitiavana. Tsy misy fanontaniana momba izany.